Yaa mushaarka ugu badan bixiya kooxaha Real Madrid iyo Barcelona? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Yaa mushaarka ugu badan bixiya kooxaha Real Madrid iyo Barcelona?
(15-9-2017) Waxaa lasoo saaray qiimeyn lagu Sameeyey mushaarka ay Sanadkii bixiyaan kooxaha Real Madrid iyo Barcelona qiimeyntaas oo lagu ogaadey Naadi walba Malaayiinta lacagta ah ee uu mushaar ahaan u bixiyo Sanadkii.
Kooxda kubada Cagta Barcelona ayaa bixisa mushaarka ugu weliba iyada oo uu ka tegay Cayaartoydii ugu mushaarka badnayd kooxdaas Neymar kaas oo ku biirey Naadiga PSG oo ku iibsatay lacagtii ugu badanayd ee abid Cayaaryahan lagu iibsado.
Baracelona oo ay ku soo biireen Cayaartoyda Ousmane Dembele, Nelson Semedo, Gerard Deulofeu iyo Paulinho ayaa mushaar ahaan u bixisa Sanadkii 470m euros halka Real Madrid oo uu kategay Alvaro Morata oo mushaar Wanaagsan qaadanayey aysana ku soo biirin Xiddigo lacag badan qaata ay Sanadkii mushaar ahaan u bixiso 450m euros.